Ukutya okuqhelekileyo kweCórdoba: Ukusuka kwi-salmorejo ukuya kwiinkumba | Uhambo lweNdaba
ULuis Martinez | 05/05/2022 14:00 | ECórdoba, IGastronomy
La ukutya okuqhelekileyo kweCordoba Yimveliso yeempembelelo ezimbini. Ngakolunye uhlangothi, i-Andalusian yavela kwixesha elidlulileyo lamaSilamsi kwaye, kwelinye, ukufika kobuKristu ukusuka kumantla ePeninsula yase-Iberia. Kweyokuqala unetyala lokusebenzisa kakhulu iziqholo ezifana ne-oregano, i-mint okanye i-tarragon, ngelixa ezininzi iiresiphi zendabuko ziye zathathwa kule yokugqibela.
Los Iimveliso zomhlaba zizithako zayo eziphambili. Phakathi kwabo, indima ebalulekileyo ngokulinganayo idlalwa yi ioli yeoli emasimini abo. Kodwa kwanemfuyo yeentaba zayo. Ngokuchanekileyo, sinokwahlula iintlobo ezimbini zeCordovan gastronomy. Umnxeba imbeko Ngenxa yophuhliso kula maziko ezolimo, yenziwe ngesuphu kunye nesityu. Kunoko, i ezilalini Isekelwe ngakumbi kwizitya ezityebileyo. Ukuba ufuna ukwazi ngcono ukutya okuqhelekileyo kwe-Córdoba, siza kukhenketha kwezona zokupheka zidumileyo.
1 Iisuphu ezibandayo, iklasiki ekutyeni okuqhelekileyo eCórdoba
2 Izityu kunye nabaqalayo
3 inyama yendawo
4 Ezinye izitya ezivela kukutya okuqhelekileyo kweCórdoba
5 Iinkumba, zakudala zeCordovan gastronomy
6 Intlanzi evela kwiphondo elingaphakathi elizweni
7 Confectionery evela eCordoba
8 Iziselo ezikhapha ukutya okuqhelekileyo kwaseCórdoba
Iisuphu ezibandayo, iklasiki ekutyeni okuqhelekileyo eCórdoba
Ipleyiti ye ajoblanco
Imozulu ihlala inefuthe kwi-gastronomy yendawo. Ibe iCórdoba yayingazi kuba yeyahlukileyo. Imozulu yayo eshushu imema ukulungiswa kweesobho okanye iikhilimu ezibandayo ezihlaziya umzimba. Ngenxa yesi sizathu, ezi ntlobo zeendlela zokupheka zendabuko kwi-Cordovan cuisine.
Mhlawumbi classic yakhe enkulu kule ngqiqo salmorejo. Izithako zayo ezisisiseko sisonka esicoliweyo, ioli yeoli, igalikhi, ityuwa kunye netumata. Isiphumo siyisikhilimu esimnandi osinikwa nge-shavings of ham okanye iqanda elibilisiwe. Kwakhona, ngenxa yokubunjwa kwayo kunye nendlela yokusela, iingcali zibandakanya le recipe phakathi kwe-gazpachos yase-Andalusi.
Kodwa asiyiyo kuphela isuphu ebandayo eqhelekileyo eCórdoba. Kunjalo ke Igalikhi emhlophe, eyenziwa ngamanzi, igalikhi, ityuwa, ioli yeoli, isonka, ii-almonds zomhlaba kunye ne-touch of iviniga. Kwangokunjalo, baya kuyikhonza kunye namaqhekeza emelon okanye iidiliya. Kwelinye icala, kukholelwa ukuba imvelaphi yayo indala kunaleyo ye-salmorejo, kuba yayinokubuyela kumaxesha amaRoma kunye nakwi-cuisine yamaGrike.
Izityu kunye nabaqalayo
Kodwa ayizizo zonke izitya ezibandayo ekutyeni okuqhelekileyo kweCórdoba. Ikwanazo neeresiphi ezithandekayo oza kuzifumana zimnandi. Phakathi kwabo, i-stew yeembotyi ezomileyo okanye i-boronia kunye ilizwe paella. Lo mva unalo, ngaphezu kwerayisi, i-ham, i-bacon, inkukhu kunye ne-chorizo, kunye ne-paprika kunye ne-clove. Ngokufanayo, ezinye izityu zikrakra i-asparagus, i-migas kunye nepapa.
Kodwa ezona ndawo zininzi zemveli imbiza yecordovan, i-chickpea stew eyenziwe nge-paprika, i-bacon yengulube, i-anyanisi, i-garlic, ityuwa kunye neklabishi. Njengendlela yokupheka enamandla ukuba kunjalo, yayisetyenziselwa ukutyisa abasebenzi bemini, kodwa, ekuhambeni kwexesha, iye yaba yinto eqhelekileyo ye-gastronomy yephondo lase-Andalusian.
I-Rabo de toro, uhlobo lokutya okuqhelekileyo lwaseCórdoba
Iinkomo zikhuliswa ngokukodwa kwiintaba zaseCórdoba. Ngapha koko, inenye yeekhabhathi ezinkulu eAndalusia ezenziwe ziinkomo, iigusha kunye neebhokhwe. Ayinakumangalisa ke ngoko, ukuba inyama sesinye sezithako eziphambili kwisityu saloo ndawo.
Ngokuphathelele kuzo, kukho izitya ezibini ezenza ukutya okuqhelekileyo kwaseCórdoba. Imalunga ne iiflamenquines kunye umsila wenkunzi. Abokuqala nabo banamalungiselelo alula kakhulu. Ezi ziziqwenga zeSerrano ham ezisongwe kwisinqe kwaye, kamva, zonka zaza zaqhotswa. Njengomdla wokwazi, siya kukuxelela ukuba igama, njengoko kukholelwa, livela kwindawo eyoluliweyo yokubonakala kwalo. Ngokunjalo, iingcali gastronomy beka imvelaphi esi sidlo kwidolophu Cordoban Bujalance, nangona iye yasasazeka kulo lonke elaseSpeyin.
Ngokwenxalenye yayo, i-oxtail nayo isitya esiqhelekileyo kwezinye iindawo zelizwe lethu. Kwimeko yakhe, iresiphi yaziwa ukususela kumaxesha amaRoma, nangona ukulungiswa kwangoku kubuyela kwikhulu le-XNUMX. Njengoko igama layo libonisa, ilungiswa ngomsila wenkomo (inkunzi yenkomo okanye inkomo) kwaye inetumato, itswele, ikherothi, ipepile, igalikhi, ityuwa kunye neqabunga le-bay. Kwakhona, yongeza ioli yeoli kunye neglasi yewayini ebomvu.
Ezi zitya zimbini sikucacisele zona zezona mpawu zokutya okuqhelekileyo kwe-Córdoba ngokwenyama. Kodwa kukho abanye abafana inyama yenkomo nge artichokes, i isityu somvundla, la Isityu seMvana okanye umntwana owanya ihagu. I-chanfaina nayo iyaxatyiswa, nayo yenziwe ngegusha kunye negazi layo, itswele, ikonofile, igqabi lebay kunye nepepile yetshilisi. Kodwa le recipe ikwangokwahlukileyo, ngokungafaniyo, kwezinye iikhitshi zasespanish kunye neLatin America.
Ezinye izitya ezivela kukutya okuqhelekileyo kweCórdoba
Ukukrazula okuvela eBaena
Kunye namalungiselelo amnandi angentla, kukho ezinye iiresiphi ezimnandi ngokulinganayo kwi-Cordovan cuisine. Umzekelo, unayo i San Jose omelet, edibanisa amaqanda abethiweyo kunye ne-breadcrumbs kunye nesosi ekhethekileyo yesafron enika umbala otyheli okhethekileyo. Kwaye, ngokunjalo, iBaena iyakrazula, kunye nezihluma zegalikhi ezithambileyo.
Ikwayinto entle isaladi ye-cordovan, efana neRashiya, kodwa kunye neminquma emnyama evela emhlabeni. Kwaye, malunga nezitya zemifuno, unayo ii-eggplants eziqhotsiweyo ngobusi kunye Iiartichokes ze-Montillana, ezilungiselelwe ngewayini evela kwi-appellation ye-Montilla-Moriles, ngoko ke igama layo.
Eyona nto inomdla kukuba lettuce ikonofile, ebizwa ngokuba yintliziyo yeCordovan, eyenziwa ngokugqoka imifuno nge-sauce eyenziwe ngegalikhi eqhotsiweyo, i-paprika, ityuwa, iviniga kunye neengcezu zeSerrano ham.
Iinkumba, zakudala zeCordovan gastronomy
Iinkumba, isidlo esisisiseko ekutyeni okuqhelekileyo eCórdoba
Kunomdla wokwazi ukuba kwenzeka ntoni ngeenkumba eSpain. Ngoxa kwezinye iindawo zingade zityiwe, kwezinye zigqalwa njengento etyiwayo. Phakathi kwezi zamva yiCórdoba, eye yaziguqula zaba yinto yonke ibhanile ye-gastronomy yayo, kangangokuba zide zithengiswe nakwiindawo zokuthengisela ezitratweni.
Ngapha koko, zininzi izinto eziye zaphuhliswa kwisixeko saseAndalusi. Unokuzizama ngeendidi ezininzi zeesosi. Kodwa, phantse zihlala zibandakanya iimveliso ezinje ngetumato, itswele, ipepile ebomvu, ikonofile, iwayini, i-mint kunye nezinye iziqholo ekulungiseleleni kwazo. Kwakhona, ezona zixhaphakileyo ziqhelekile enongwe, nangona abanye abapheki baye baqalisa ukwenza iiresiphi ezintsha nezinesibindi. Ngokomzekelo, i-snails yesitayela samaRoma, i-sautéed kunye ne-eels, inxile ngeentambo ze-ham kunye ne-carbonara.
Intlanzi evela kwiphondo elingaphakathi elizweni
Ipleyiti yeentlanzi ezifakwe emanzini
Njengoko usazi, iCórdoba ayinalo ulwandle, nangona inemilambo. Kodwa oku akuthinteli ukuba iintlanzi zibekho kwezinye zeeresiphi zayo ze-gastronomic. Njengakwezinye iindawo zaseSpain, incinci kakhulu usebenze, isityu ityhuna kunye neitapile kunye nepepile. Ngamanye amaxesha, iphinda ilungiswe nge-cod enetyuwa. Le yokugqibela ikwasetyenziselwa ukupheka ikonofile isuphu, ehamba kunye netumato.
Nangona kunjalo, zixhaphake ngakumbi intlanzi yasemanzini, ngakumbi i-palometa, ethi eCórdoba inikwe igama elikhethekileyo elithi "japuta". Ifakwe kwi-paprika emnandi, igalikhi, iviniga, i-oregano kunye nomgubo uze uqhotswe kwioli yeoli eninzi. Kodwa kwakhona i-marinade kunye ne-vinaigrette isetyenziselwa ukugqoka ezi zitya. Ngokugqibela, kuninzi kudliwe iiankile.
Confectionery evela eCordoba
Ngokumalunga needessert, zikwahluke kakhulu kwi-gastronomy yeli phondo laseAndalusi. Kukho iitshizi ezilungileyo, phakathi kwazo enye evela kuyo IiPedroches, eyenziwe kwintlambo ye-homonymous, esele ingumda we-Extremadura. Kodwa, ngaphezu kwayo yonke into, i-confectionery ibaluleke kakhulu phakathi kokutya okuqhelekileyo kwe-Córdoba.
Ubumnandi be-Cordovan cuisine idibanisa izinto eziqhelekileyo zaseAndalusi kunye nezinye zeengcambu zaseLa Mancha. Kweyokugqibela, umzekelo, iziqhamo eziqhotsiweyo ezifana ne iintyatyambo eziqhotsiweyo, osuka eCampo de Calatrava kwaye sele efikile eMexico naseColombia. Endaweni yoko, balapha ngakumbi Aguilar meringues, i iidonuts ezivela ePriego kunye intlama yequince evela ePuente Genil.
Kwimeko nayiphi na into, izithako ze-Cordoban confectionery zibusi, isesame kunye ne-matalahúva. Nangona kunjalo, enye yezona dessert ziqhelekileyo kwiphondo laseAndalusi ikeyiki intambo, ukutya okuluncuthu okwenziwa ngoboya bengelosi kunye neqebengwana eliyipuff. Kwinguqulelo yayo yomntu ngamnye, ifumana igama elithi mitten kunye neepadding ezifanayo zithwala iikeyiki ze-pastry ezimfutshane.
Okokugqibela, ukuba ufuna ukonwabela enye into etyiwayo yaseCordovan, ungaodola Isidudu esimnandi. Kule meko, zenziwe ngomgubo, iswekile, ubisi, i-anise, i-lemon, ioli yeoli kunye nesinamoni.
Iziselo ezikhapha ukutya okuqhelekileyo kwaseCórdoba
Iwayini evela eMontilla-Moriles
Asinakulugqiba ukhenketho lwethu lwaseCordovan gastronomy ngaphandle kokuthetha ngeziselo. Sele sikhankanye ngaphambili i ihlelo lewayini imvelaphi Montilla-Moriles. Kuyo uya kufumana iiwayini ezibalaseleyo.
Ukuba udibanisa iglasi yefino nenye ye dulce (umzekelo, Pedro Ximénez), uya kuba ne amashumi amahlanu anamashumi amahlanu, esetyenziswa kakhulu kwisixeko njenge-aperitif. Kwaye, ukugqiba ukutya okulungileyo, unokuodola iglasi Rute brandy, eyenziwe ngeanise kwaye idumileyo ehlabathini.
Ukuqukumbela, sikubonise izithako kunye nezitya zemveli ze ukutya okuqhelekileyo kweCordoba. Nangona kunjalo, asinakusilela ukukhankanya ezinye izinto ezimangalisayo ezifana ne I-Serrano ham evela kwintlambo yePedroches, i Isoseji yePozoblanco, Las Ipudding emnyama evela eFueneovejuna okanye, kwintsimi yemifuno, i icordovan hash, enekhukhamba kuphela, i-anyanisi, i-pepper, i-tomato, ioli yeoli, ityuwa kunye neviniga. Ngaba awuziva undwendwela inzwakazi ECórdoba kwaye ukonwabele olu lonwabo lwe-gastronomic?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » Spain izixeko » ECórdoba » Ukutya okuqhelekileyo kweCordoba